Ukudala iwebhusayithi engena ngaphakathi ngo-2014 | Martech Zone
Ukwenza iwebhusayithi engena ngaphakathi ngo-2014
NgoLwesibini, Matshi 18, 2014 NgoLwesibini, Matshi 18, 2014 Douglas Karr
Veki nganye kwi Umda weRadiyo yeWebhu I-podcast, u-Erin kunye noxinzelelo lokuba uninzi lweenkampani olunazo kukuba ziyakholelwa ukuba indawo yazo yincwadana ekhompyutheni kunokuba ibe ngumthengisi ophilayo, ophefumlayo. Xa indawo yakho ivelisa umxholo omkhulu okwangoku, rhoqo kwaye kufanelekile… wakha umfutho kunye nceda abantu bakholelwe kuwe kunye neemveliso okanye iinkonzo zakho.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba andikholelwa engenayo indawo ye ukuphuma ngaphandle iindlela zokuthengisa kunye nentengiso. Iinkampani ezininzi zidibanisa ezi zinto zimbini kodwa xa zisebenza kunye, kuyinto entle!
Nantsi infographic evela kuSuyati kwintengiso engenayo, kwinto ekufuneka uyenzile ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho iyabuyela kubatyeleli kulo nyaka:
Umntu womthengi Ukuthatha isigqibo sokuba uza kuhlangana njani nohlobo ngalunye lwendwendwe.
Umxholo onokutya okulula Umxholo wepremiyamu wokugaya lula.
Iindlela zokwazisa nge SEO, PPC, Blogs, Imidiya yokuncokola, Izimemo zeWebhu.
Iifowuni zokuSebenza (Ii-CTA) ukuqhuba iindwendwe nzulu kumaphepha okufika.
Imihla yokuLungisa ukuqhuba uguquko.
Ukukhokelwa kweNkokeli ukukhokela iindwendwe ekubeni ngabathengi.
Qiniseka ukuba ubhalisela ikhosi yethu yengozi Marketing Inbound Kwithebhu yasekhohlo, yikhosi yeeveki ezi-5 ekunyathela kuyo yonke imiba yesicwangciso esiphumeleleyo sokuthengisa ngaphakathi.
Ukwazisa: Suyati uliqabane lethu e DK New Media -Basincedile kwimida emininzi kwaye banesixhobo esimnandi sokuvelisa umxholo kunye nolawulo lwenkqubo ebizwa Voraka esiza kubhala malunga nayo.
tags: kublogablogsabantu abathengiumnxeba kwisenzoubiza isenzoctaurhwebo inboundiwebhusayithi engenayokhokelaUkuthengisa iWebinarukuthengisa okungaphandlePPCUkukhuthazwaSEOImidiya yokuncokola
I-SXSW ka-2014 yokuSebenza ngokuSingathiweyo
Ukubona kwangaphambili: Ukuqonda kwabathengi kunye neQonga lokuGcina